Ha mere ka amara ụdị mwakpo ọhụrụ nke metụtara Intel na AMD processors | Site na Linux
Ha choputara udiri mmeghari ohuru nke na emetuta ndi oru Intel na AMD
Otu ìgwè nke Ndị nchọpụta si Mahadum Virginia na California gosipụtara ụdị ọgụ ọhụrụ na usoro microarchitecture nke ndị na-arụ ọrụ Intel na AMD.
Usoro agha a chọrọ jikọtara ya na ojiji nke oghere dị n'etiti micro-arụmọrụ (micro-op cache) na nhazi, nke enwere ike iji wepu ozi nke edoziri na ntuziaka nke ntuziaka.
Ọ hụrụ na usoro ohuru putara ihe kari Specter attack v1 na usoro nke arụmọrụ, ọ na-eme ka o sie ike ịchọpụta ọgụ ahụ ma egbochighị ya site na ụzọ nchebe dị ugbu a megide mwakpo site na ọwa n'akụkụ ndị ezubere iji gbochie adịghị ike nke nkọwa ntuziaka na-akpata.
Dịka ọmụmaatụ, iji nkwupụta LFENCE na-egbochi nsị na usoro ndị na-esote nke igbu egbu, mana anaghị echebe megide nsị site na akụkụ microarchitectural.
Usoro a na-emetụta ụdị nhazi Intel na AMD ewepụtara kemgbe 2011, gụnyere Intel Skylake na AMD Zen usoro. CPU ndị nke oge a na-akwusi ntuziaka ihe nhazi dị mgbagwoju anya n'ime ọrụ RISC dị ka micro-arụmọrụ dị mfe, nke a na-echekwa n'ime ebe di iche.
Ebe nchekwa a dị iche site na ọkwa dị elu, enweghị ike ịnweta ozugbo ma rụọ ọrụ dị ka ebe nchekwa iyi iji nweta ngwa ngwa nke nsonye ntuziaka CISC n'ime microinstruction RISC.
Otú ọ dị, ndị nnyocha ahụ achọtala ụzọ ịmepụta ọnọdụ ndị na-ebilite n'oge esemokwu oghere oghere na ikwe ka ikpea ọdịnaya nke cache nke micro-arụmọrụ site nyochaa ọdịiche dị n'ime oge ogbugbu nke omume ụfọdụ.
A na-ekewa micro-op cache na Intel processors n'ihe metụtara eri CPU (Hyper-Threading), mgbe ndị nhazi ahụ AMD Zen jiri cache ejiri, nke na-emepụta ọnọdụ maka ụcha data ọ bụghị naanị n'ime otu eri nke igbu, kamakwa n'etiti eri dị iche na SMT (ịghapụ data nwere ike ịdị n'etiti koodu na-agba ọsọ na isi ihe dị iche iche CPU).
Ndị nchọpụta ahụ tụpụtara usoro bụ isi iji chọpụta mgbanwe dị n'ime oghere micro-ops na ọnọdụ mwakpo dị iche iche nke na-enye ohere ịmepụta ọwa data nnyefe nzuzo ma jiri koodu na-adịghị ike nyocha data nzuzo, ma n'ime otu usoro (dịka ọmụmaatụ, ịhazi usoro nke ịwụfu data mgbe ị na-agba nke atọ -nke party na JIT engines na igwe di iche) na n'etiti kernel na usoro na ohere onye ọrụ.
Site na ichoputa uzo di iche iche nke agha Specter site na iji ihe mkpuchi micro-op, ndi nyocha ahu mere ka ha nweta 965.59 Kbps site na onu ogugu nke 0.22% na 785.56 Kbps mgbe ha na-eji mgbazi emehie, na ntanye n'ime otu ebe nchekwa oghere. na ọkwa ọkwa.
Site na nhapụta nke ọkwa ọkwa dị iche iche (n'etiti kernel na ohere onye ọrụ), ntinye bụ 85,2 Kbps na mgbatị mmezi agbakwunyere na 110,96 Kbps na ọnụọgụ nje 4%.
Mgbe ị na-awakpo ndị na-arụ ọrụ AMD Zen, nke na-emepụta ọgbaghara n'etiti isi CPU dị iche iche, ntinye bụ 250 Kbps na ọnụọgụ nje nke 5,59% na 168,58 Kbps na mmezi njehie. E jiri ya tụnyere usoro Specter v1 a ma ama, mwakpo ọhụrụ ahụ ghọrọ 2,6 ugboro ngwa ngwa.
A na-atụ anya na iweghasị ọgụ mkpuchi micro-op ga-achọ mgbanwe ndị na-eweda arụmọrụ karịa karịa mgbe enyere ikike Specter.
Dị ka nkwenye kachasị mma, a na-atụ aro igbochi ụdị mwakpo ahụ ọ bụghị site na ịkwụsị caching, kama na ọkwa nke anomaly nlekota na ịchọpụta ụdị mkpuchi dị iche iche nke ọgụ.
Dị ka ọgụ Specter, organizinghazi ahihia nke kernel ma obu usoro ndi ozo choro igbu nke edemede ufodu (Ngwa) n'akụkụ ihe onye ahụ na - eme, na - eduga na ntuziaka nke ntuziaka.
Ihe dị ka 100 ụdị ngwaọrụ ahụ achọtala na kernel Linux, ewepụ ya, mana a na-achọpụta ihe ngwọta mgbe niile iji mepụta ha, dịka ọmụmaatụ ndị ejikọtara na ịmalite mmemme BPF pụrụ iche na kernel.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya, you nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ha choputara udiri mmeghari ohuru nke na emetuta ndi oru Intel na AMD
Firmware na Driver na Linux: Otu ntakịrị ihe gbasara ihe 2 a
Shopify bu onye ohuru nke Network Network mepere emepe